One of the Zimbabwean Nationals deported from the United Kingdom is seen through a bus window upon arrival at Robert Mugabe International airport in Harare, Thursday, July 22, 2021. Zimbabwe has received the first batch of dozens of its citizens being deported from Britain, some after staying in that country for decades and forced to leave families behind to face an uncertain future back home. Rights groups and politicians in Britain had mounted pressure to stop the deportations, arguing that the deportees are at risk of persecution in Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Police patrol the airport upon the arrival of Zimbabwean Nationals deported from the United Kingdom, at Robert Mugabe International airport in Harare, Thursday, July 22, 2021. Zimbabwe has received the first batch of dozens of its citizens being deported from Britain, some after staying in that country for decades and forced to leave families behind to face an uncertain future back home. Rights groups and politicians in Britain had mounted pressure to stop the deportations, arguing that the deportees are at risk of persecution in Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Relatives of Zimbabwean Nationals deported from the United Kingdom wait for their arrival, at Robert Mugabe International airport in Harare, Thursday, July 22, 2021. Zimbabwe has received the first batch of dozens of its citizens being deported from Britain, some after staying in that country for decades and forced to leave families behind to face an uncertain future back home. Rights groups and politicians in Britain had mounted pressure to stop the deportations, arguing that the deportees are at risk of persecution in Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)